आय कर कि कराधान को साधारण प्रणाली मा हो सबै कानुनी संस्थाहरू लागि अनिवार्य छ। यो कम्पनी को सबै गतिविधिहरु देखि आय थप्दा र हालको दर द्वारा गुणन गर्दाको द्वारा गणना गरिएको छ।
गणना र लाभ संगठनमा कर को भुक्तानी प्रक्रिया, स्वामित्व सबै प्रकारका लागि कर दर अध्यायमा संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। 25 कर कोड को। क्षेत्रीय प्रेरित कर प्रोत्साहन प्रयोग प्रक्रिया नियमन। आफ्नो काम मा वकील र Accountants पनि वित्त मंत्रालय र नियमहरु केही अंक संघीय कर सेवा स्पष्टिकरण प्रयोग।
प्रजा र वस्तुहरु
रूसी संगठन को जुवा व्यापार मा संलग्न र सरलीकृत कर प्रणाली, UTII uat प्रयोग गर्ने छैन ती।
विदेशी संगठन, रूसी संघ को क्षेत्रमा भुक्तानी छन् जो।
यस सर्वसञ्चित समूहका सदस्यहरू।
उद्यमी कर, UTII, USN, uat तिर्न गर्ने छूट। यदि आफ्नो वार्षिक कार्यान्वयन मात्रा कानुनी सीमा नाघ्यो, उद्यमी राशि जो को कानूनी प्रतिबन्ध को दर भन्दा बढी कर्पोरेट आयकर, भुक्तानी गर्नुपर्छ। पनि तयारी मा लगे र रूसी संघ मा समातेर फिफा 2018 छन् संगठनों मा 2017 गिरावट मा अपवाद अन्तर्गत
संगठन को लाभ गणना लागि आधार। कला मा। कर कोड को 247 भन्छ कि आय:
घरेलू संगठन र विदेशी कम्पनीहरु को प्रतिनिधि कार्यालय लागि - छ आय को राशि, अब प्राप्त (आफ्नो प्रतिनिधि) व्यय को खर्च गरेर कम;
सकल लाभ, यो प्रयोगकर्ता मा गणना को मूल्य;
अन्य विदेशी संगठनहरूका लागि - कला अन्तर्गत मान्यता पैसा आय को मात्रा हो। 309 को कर कोड को।
राजस्व संगठन को क्रियाकलापहरू आर्थिक लाभ पहिचान छ, दयालु वा नगद मा व्यक्त गरे। यो खर्च र ग्राहकहरु (जस्तै भ्याट) लागू गर्ने कर अघि संगठनको सबै आय योगफल हो। तिनीहरूले प्राथमिक कागजातहरूको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। बिक्री देखि आय आय र गैर-सञ्चालन आय विभाजित छन्।
संगठन को लाभ मा गणना गर्दा कर, कर दर खाता रसिद ले गर्दैन:
निःशुल्क सम्पत्ति प्राप्त;
मा जमानत को रूप ;
ऋण सम्झौताहरू अन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति;
सम्पत्ति लक्ष्य वित्त द्वारा प्राप्त भयो।
लागत करदाता तिनीहरूले आय उत्पन्न उद्देश्य थिए अवस्था मा लगे जो उचित र दस्तावेज खर्च हो। जब संगठनको लाभ मा गणना कर, छैन खर्च मा कर दर जरिवाना, सजाय, जरिवाना, लाभांश, स्वैच्छिक बीमा लागत, आर्थिक सहायता, पेन्सन पूरक र यति मा। को मात्रा को डी पूर्ण सूची मा पदार्थ को अतिरिक्त उत्सर्जन लागि भुक्तानी रकम समावेश यस लेखमा प्रस्तुत लागत देखि छोडिन्छ। 270 को कर कोड को। सामान्यकृत खर्च पूर्ण छैन बन्द लिखित गर्न सकिन्छ, तर आंशिक। 2017 देखि कर्मचारीहरु को योग्यता को स्तर को मूल्यांकन मा खर्च रकम पनि खर्च गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। लिखित पुष्टि गर्नुपर्छ योग्यता कर्मचारी को स्तर को मूल्यांकन गर्न आफ्नो सहमति: तर, एक महत्त्वपूर्ण अवस्था छ।
कर दर कर्पोरेट लाभ मा एक निश्चित रकम सेट गरिएको छ। 6,9र 12 महिना प्रदान गर्न आवश्यकता लागि मूल्यांकन रकम को संग्रह मा रिपोर्ट। अग्रिम भुक्तानी मासिक आधारमा बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। 2016 देखि बिक्री देखि औसत त्रैमासिक कुल आय 15 लाख rubles वृद्धि।
लाभ कर कसरी गणना गर्ने? कर दर आय र व्यय भिन्नता ले गुणन। राजस्व रकम कम लागत भन्दा भने आधार शून्य छ। लाभ क्यालेन्डर वर्ष को शुरुवात देखि एक अक्रूअल विधि मा निर्धारित। रूपमा कर्पोरेट आयकर मा ब्याज दर प्रकारको को कानून मा बाहिर spelled र राजस्व गतिविधि प्रत्येक प्रकार को लागि अलग छलफल हुनुपर्छ।
payers विभिन्न विभाग लागि आय र व्यय को विशेष NK निर्धारित परिभाषा: बैंकहरू (। लेख 290-292), बीमा कम्पनीहरु (लेख 293), गैर-सरकारी पीएफ (लेख 295.), Microfinance संस्थाहरू (लेख 297.), को जमानत बजार को व्यावसायिक सहभागीहरू ( कला। 299), केन्द्रीय बैंक संग लेनदेन (कला। 280), जरुरी वित्तीय कारोबार (कला। 305), खाली संगठन (कला। 299)। जुवा संगठन आय र व्यय को अलग रेकर्ड हो। खाता मात्र आर्थिक जायज दस्तावेज जो लागत, मा लिएर।
कर्पोरेट लाभ मा कर दर के हो?
भुक्तानी योगफल संघीय र स्थानीय बजेट को संग्रह हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यहाँ प्रतिशत को वितरण मा परिवर्तन 2017 पछि देखि गरिएको छ। कर्पोरेट लाभ कर मा 20% अपरिवर्तित आधारभूत दर। पहिले भुक्तानी रकम 2% संघीय बजेट गए, र 18% स्थानीय थिए। 2017 देखि 2020 को एक नयाँ योजना शुरू। 17% - संघीय बजेट 3% को दर गणना कर को राशि, र आरएफ विषयहरू को बजेट हस्तान्तरण गरिनेछ। क्षेत्रीय अधिकारीहरूले करदाताओं केही विभाग लागि शुल्क दर कम गर्न सक्छ। वर्ष 2017-2020 मा, यो 12.5% भन्दा कम हुन सक्दैन।
संगठन को लाभ मा आयकर दर केहि प्रकारको छ:
10% - विदेशी कम्पनीहरु, कन्टेनर को भाडा, मोबाइल TC, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात को प्रयोगबाट राजस्व।
एक प्रतिनिधि कार्यालय, रूसी संघ मा गतिविधिहरु गर्न सम्बन्धित मार्फत विदेशी संगठन को लाभ मा कर दर 20% छ।
लाभांश रूसी संगठन - 13%। पूर्ण रकम स्थानीय बजेट रहिरहन्छ कर। विदेशी कम्पनीहरु द्वारा प्राप्त लाभांश 15% को दर मा taxed छन्। यो सरकार जमानत मा ब्याज आय पनि समावेश छ।
30% - रूसी केन्द्रीय बैंक, निक्षेप मा लिपिबद्ध छन् जो देखि आय।
आय बैंक रूस - 0%।
कृषि उत्पादकहरु को लाभ - 0%।
मुनाफा चिकित्सा, शैक्षिक गतिविधिहरु सामना - 0%।
0% - साझेदारी राजधानी को कार्यान्वयन सम्बन्धित सञ्चालन देखि आय।
0% - पर्यटक-मनोरंजन क्षेत्र को नवीन आर्थिक क्षेत्रमा बाहिर कामहरू देखि आय, आय र व्यय को अलग लेखा प्रदान।
0% - तिनीहरूले भन्दा बढी छैन कुल राजस्व को 90% भन्ने अवस्था मा राजस्व क्षेत्रीय लगानी परियोजना।
प्रत्येक कर अवधि को अन्त मा, संगठन FTS मा घोषणामा प्रदान गर्नुपर्छ। रिपोर्ट फारम र यसको तयारी को नियम संघीय कर सेवा N MMV-7-3 / 600 को आदेश द्वारा अनुमोदित छन्। घोषणा कम्पनी वा यसको संबद्ध कम्पनीहरु को स्थान को निरीक्षण पेश गरिएको छ। रिपोर्ट कागज फारममा बुझाइएको। विद्युतीय घोषणा अघिल्लो वर्षको लागि कर्मचारीहरु को औसत संख्या 100 भन्दा बढी मानिसहरू राशि जसमा सबै भन्दा ठूलो करदाताओं, साथै संगठन लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
2017 मा कराधान मा परिवर्तन
खराब ऋण को राशि अघिल्लो लेखमा वा अवधि लागि राजस्व को 10% भन्दा कम हुनुपर्छ। सन्देहपूर्ण ऋण - यो पारस्परिक दायित्व को आकार नाघ्यो एक ऋण। संगठन को सन्देहपूर्ण ऋण मा, एउटै counterparty गर्न प्राप्य र payables दर्ता गरिएको छ भने देय खाताहरूको अतिरिक्त मात्र रकम बन्द लिखित गर्न सकिन्छ।
सहन सकिने आकार हानि सीमित छ। 01/01/2017 देखि 12/31/2020 सम्म 50% भन्दा को अघिल्लो अवधिको घाटा कम गर्न असम्भव थियो। यो परिवर्तन कर ब्रेक लागू जो आधार असर गर्दैन। 01.01.2007 पछि व्यय थिए कि घाटा परिवर्तनहरू सम्बन्धित।
2017 देखि 01.01.2007 पछि व्यय घाटा को मात्रा को स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटाइयो। स्थानान्तरण अब निम्न वर्ष मा प्रवेश गर्न सकिन्छ। राज्य र स्थानीय बजेट भुक्तान कर को समायोजन गर्न सम्बन्धित परिवर्तन, को घोषणा र भुक्तानी प्रणाली प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। 17% को दर मा - यी कागजातहरू रकम 3% को दर, र जो मा सशुल्क के प्रतिबिम्बित स्पष्ट गर्नुपर्छ।
ऋण को कारण को पहिचान थप समेकित भएको छ। उदाहरणका लागि, त्यहाँ दुई सम्वन्धि विदेशी संगठन (को संगठन को एक दोस्रो को संस्थापक छ) छन्। तिनीहरूलाई को एक रूसी उद्यम ऋण आए अघि। यस मामला मा, ऋण समेकित पहिचान छ। र यो एक विदेशी कम्पनी, ऋणदाता स्वामित्वमा राजधानी साझेदारी कस्तो कुरा छैन। अब सर्वसञ्चित ऋण सबै करदाता दायित्व को आकार निर्धारण गरिन्छ।
पूँजीकरण अनुपात को अवधि परिवर्तन भएको छ समयमा भने, कर आधार समायोजन को एउटा प्रश्न हुन सक्छ। नियन्त्रित ऋण मा 2017 व्यय देखि दुबारा गर्न आवश्यक छैन। पहिले, खर्च रकम उल्लेख रूपमा कर्मचारी को स्तर आकलन गर्न व्यय को खर्च समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो audits प्रोत्साहित गर्न खातामा कुनै वस्तुको मूल्य मा प्रावधान लिएर विकास गरिनेछ। खातामा लिन मूल्यांकन सेवाहरू प्रदान गर्न एउटा सम्झौता आधारमा सञ्चालन भएको थियो भने उद्यम को लागत, सक्षम हुनेछ, र परीक्षण संग रोजगार सम्झौता निष्कर्षमा।
कर लागि पेनाल्टी चार्ज क्रम र जरिवाना रकम वृद्धि। 01.10.2017 वर्ष पछि उत्पन्न कि delinquency परिवर्तनहरू सम्बन्धित। तपाईं कर भुक्तानीको अवधि 30 दिन भन्दा अधिक छ भने, दण्ड को राशि यस्तो तर्कको भर हुनेछ:
1/300 केन्द्रीय बैंक दर देखि 1 30 बाँकी दिन लागू;
1/150 केन्द्रीय बैंक दर ढिलाइ को 31 दिन संग प्रभावकारी।
01/10/2017 सबै बकाया को भुक्तानी को मामला मा, ढिलाइ को दिन को संख्या कुरा छैन।
कर प्रोत्साहन: राज्य देखि एक उपहार।
सामाजिक शिक्षाको लागि, उपचारसम्बन्धी लागि deductions: कागजातहरू। सामाजिक कर deductions उपलब्ध ...
तपाईं एक घर को लागि एक उपहार प्रमाणपत्र छ भने, कर सबै अवस्थामा भुक्तानी छ!
वरिष्ठ लागि सम्पत्ति कर के हो? पेंशनरहरुलाई लागि सम्पत्ति कर प्रतिफलको
ल्याटिन एक राक्षस को expulsion: पाठ। ल्याटिन मा भूत हिज्जे को expulsion, फिल्म देखि "अलौकिक"
मिक्सर भवन "Fiolent MD1-11E": विशेषताहरु र समीक्षा
कोरियाली नुस्खा बन्दागोभी: सबै अवसरका लागि स्वादिष्ट खाजा
स्प्रे M16: समीक्षा र निर्देशनहरू
सेतो सुन एक श्रृंखला - को sophistication र व्यावहारिकता
बाइनरी विकल्प दलालहरू: कार्यको मूल सिद्धान्त